Abenobuthi Amathiphu 'ebona'
Ngaleso sikhathi samanje ehlathini kukhona ezihlukahlukene ezifana amakhowe ukuthi ngisho wazibonela amakhowe pickers basengozini wokwenza iphutha ngokukhetha. Abanye kuphela ongasho ukuthi kukhona amakhowe ezidliwayo futhi enobuthi, kodwa abanye bazi ukuthi kukhona isigaba non-ezidliwayo kanye kunemibandela amakhowe ezidliwayo.
Uma uthanda ke amakhowe endle, ukuze kahle bakhethe bese ukuhlala siphilile, sinempilo, udinga ukwazi ukuthi baqikelele ngesikhathi iqoqo noma ithengwe. Ngakho, kubalulekile ukuba ukhulume lolu hlobo amakhowe njengoba ezinesihlungu ukuthi ungabahlukanisa kusuka ngamunye ezidliwayo. Phela, lezi isikhunta kubangele buhlungu yingozi empilweni yethu kanye kungaholela ekufeni.
Abaningi baphikisa ngokuthi russules eluhlaza ezidliwayo. Nokho, phakathi kwabo kukhona futhi enesihlungu, nakuba ayengafiki abanamanxeba abulalayo - russules ophuzi, ziyaqothuka futhi esivuthayo-ezonakalisayo. Khumbula ukuthi amakhowe akuzona ezidliwayo ngefomu yabo eluhlaza. Futhi, awukwazi udle amakhowe okuye esezingeni eliphansi ukwelashwa ezishisayo. Umuntu wadla amakhowe engahluziwe uthi ukuthi akwenzekanga lutho kuye, kufanele wazi ukuthi lokhu kungenxa yokuthi indlela amakhowe eziningi yayidlelwa njengoba benjalo, futhi lokho wokugaya ukudla komzimba. Kakade, ukungabondli wonke umuntu angakwazi ozibongayo ukuthi amakhowe akuzange kumlethele phi hlungu. Ngakho-ke kungcono ukuthatha isinyathelo ukuze uphephe waphinda, nakuba endabeni isikhunta ukungakwazi engadingekile.
amakhowe anobuthi, fly agaric phakathi okuyinto oluthatha indawo yokuqala, ihlukaniswe ibe ezinesihlungu ezinobuthi futhi ebulalayo. Amanita muscaria, isibonelo, libhekwa njengoba inkomishi ezinesihlungu ukufa - esigabeni obulalayo anobuthi. Amacala lapho kukhona Amanita muscaria ubuthi ezingajwayelekile kakhulu. Nokho, ngokwemvelo okwenzeka amanita ezinobuthi esibulalayo - futhi ezinukayo amanita amanita emhlophe. Ubungozi wabo banesibopho ezidliwayo mushroom kabili, isibonelo, amakhowe, russula, Greenfinch.
Ngokuvamile amakhowe ezidliwayo zinobuthi amakhowe-twins ukuthi amakhowe ongenalwazi kalula udidekile. Kuyingozi e ukuthi kunezinhlobo eziningi, futhi kukhona nozakwabo e amakhowe ezidliwayo kakhulu. Ngakho-ke, ukuze ugweme elinobuthi, okungaholela ukulahleka impilo ngisho ukuphila, kubalulekile ukugcina imithetho yokuphepha lapho ngiphakamisa amakhowe:
Kungcono udle amakhowe kuphela aqoqene ngokwabo (uma une kubo eqoqwe ngokuvumelana nemithetho). Phela, ukudla uthenge noma uma kungenjalo zitholwa isikhunta, asikwazi qiniseka bona zathathwa kuphi futhi kanjani, nokuthi lawo madoda akhethwa. abenobuthi kudingeka ukuba bakwazi ukuhlukanisa futhi ziqinisekise akekho kuwe intando.
Uma unqume sina ukudla amakhowe bebodwa, funda ke kusukela abanolwazi amakhowe pickers.
Ungavumeli izingane udle amakhowe asendle: okokuqala, aziyi encane lokhu kudla, futhi okwesibili, ingozi uhlale khona, futhi izingane kufanele bavikelekile kuwo.
Khumbula, uma uzwa ukungakhululeki amakhowe emva wadla, amahora nambili kudingeka ufune usizo lukadokotela. Ukushesha lokhu kwenzeka, amathuba ngaphezulu ukwenze ngaphandle kwemiphumela zempilo ezingathi sína.
Umuntu ngamunye kudingeka sikwazi ukunikeza usizo lokuqala for mushroom poisoning. Okokuqala, kudingeka ucele i-ambulensi. Ngaphambi ukufika kwalo isiphuzo mayelana izinkomishi ezinhlanu amanzi abilayo, ostuzhennoy egumbini lokushisa, futhi isixazululo soda noma potassium permanganate. Udinga ukuphuza sips amancane. Khona-ke ntombazane ukuhlanza. Inqubo efanayo kufanele prodelyvat izikhathi ezimbili noma ezintathu. Ngemva kokugeza ngamunye esiswini kufanele baphuze laxative ukususa ubuthi kusukela amathumbu. Ngemva kokuthola lezi laxative kanye wamathumbu yokuhlanza kufanele ahambise enema futhi abe pair of amaphakheji ocushiwe carbon. abenobuthi ezingafakwanga kudliwa, kufanele kwesokunxele kudokotela ngokushesha ukuhlaziya ngoba khona Ubuthi, futhi ukuzimisela ngokucacile yayo.
Crane Gray: isithombe, yokuphila izici
IRed Encwadi Karelia: izitshalo, izilwane, isikhunta, inhlanzi
Kuyini kumhambela: zikhona izingozi nasezingosini nemiphumela
Izidakamizwa "Kapsikam". Yokusetshenziswa
Ukuxhuma kwi-inthanethi, ukuhlela inethiwekhi yendawo, ukusetha iphuzu lokufinyelela
Indlela apheke okunomsoco ipea isobho e multivarka "Panasonic"?
Ikholomu Ukhonkolo: design and ukufakwa
"Fitomutsil Slim Smart": ukubuyekezwa, izincazelo, imiyalelo
Yiya yokubhuka. com: Izibuyekezo kuzosiza sithole ihhotela
Indlela ugeza ekhaleni womntwana? Incazelo inqubo izingane bobudala obungefani